भूत प्रेतमा विश्वास गर्नु हुन्न भने यो हेर्नुहोस्, भूतको आवाज क्यामेरामै रेकर्ड, सिङ्गो टोल त्रासमा ! (भिडियो सहित) | NewsSudur
भूत प्रेतमा विश्वास गर्नु हुन्न भने यो हेर्नुहोस्, भूतको आवाज क्यामेरामै रेकर्ड, सिङ्गो टोल त्रासमा ! (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा दिनानुदिन देखिने समस्या र मान्छेले भोगेका पीडाहरूका विभिन्न प्रकारहरू बारे थाहा पाउने अवसर मिल्यो । तर आजको कार्यक्रममा एउटा यस्तो विषयले प्रवेश पाउदैछ जसको कल्पना हामीले गरेका थिएनौ ।
राजधानीको एउटा व्यस्त बस्तीमा एउटा घर छ । जहाँ एक महिना देखी मानिसहरू त्रासमा बाचेका छन् । त्यस घरका मानिस मात्र होईन्न अव परका मानिसहरू समेत भयभीत भएर बाचिरहेका छन् । डरमा बस्नेहरू डेरा सरिसके, छिमेकमा रहेका बालवालिकाहरु डरले ममा घर जान्छु भन्न थालिसके । परिवारका सदस्यहरू र बाँकी डेरावालाहरु एक्ला एक्लै बस्न नसका समूहमा बस्न थालेका छन् । तर डर क्रासको सिल्सिला अझै रोकिएको छैन । यो डर हो भूत अथवा प्रेतको अथावा कुनै आत्मा वा अदृश्य शक्तिको हो।
यो विषयलाई लिएर अनगन्ती टेलिफोन कलहरू आए । तर आजको दिनमा भूतको विषयमा रिपोटिङ गर्न क्यामेरा बोकेर को जाओस् । तर दृष्टान्तहरु यस्ता दिइए कि हामी जान बाध्य भयौ । यहाँ कुरा भूत, प्रेतको मात्र थिएन एउटा सिङ्गो परिवार महिना दिन देखी आतंकित थियो । विश्वास र अविश्वासको मुद्धालाई एकातिर पन्छाएर हामीले यो परिवार र ती छरछिमेकलाई मद्दत गर्न निधो ग¥यौ । र हाम्रो कार्यक्रममा इतिहासमै पहिलो पटक भूत प्रेत सम्बन्धी विषयको रिपोटिङ गर्न ललितपुरको टिकाथली पुग्यौ । घटनाको बास्तिविक्ता बुझ्न यो रिपोट हेरौँ ।
न्युज२४ नेपाल बाट